| Huawei ကပေါ်ဖို့အတွက် QR Code ကို scan APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ဘ‌‌လော့ခ် » Huawei ကပေါ်ဖို့အတွက် QR Code ကိုဒီနေရာတွင်အားလုံးသတင်းအချက်အလက်စကင်ဖတ်လုပ်နည်း
ဘယ်လို APK ကိုဒီနေရာတွင် Huawei ကပေါ်ဖို့အတွက် QR Code ကိုအားလုံးသတင်းအချက်အလက်စကင်ဖတ်မှ
Huawei ကဖုန်း QR codes တွေကို scan နည်းလမ်းနှစ်ခုရှိပါတယ် - ကိုတိုက်ရိုက်သင့်ရဲ့ device ကိုအပေါ်စတော့ရှယ်ယာကင်မရာ app ကိုအတူစကင်ဖတ်ဖို့သို့မဟုတ် Google Play စတိုးအပေါ် Third-party apps များကိုသုံးနိုင်သည်။ ဟွာဝေးဖုန်းများလွဲလျှင်, က Android စမတ်ဖုန်းအများစု image ကိုကနေ QR ကုဒ်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ အစားဇာတိကင်မရာ app ကိုနှင့်တိုက်ရိုက် QR codes တွေကို scan ဖတ်၏, သင်သည်သင်၏စက်ပစ္စည်းပေါ်ရှိ image file ကိုကနေ QR ကုဒ်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးပေးနိုင်သည်။ သင့်ရဲ့ device ကိုပုံရိပ်များအဖြစ် QR codes တွေကိုဖမ်းယူလို့ပဲ။ ဤနည်းကိုသင်ဖို့အတွက် QR codes တွေကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးရန်သင့် device ကိုအပေါ်ကင်မရာနှင့်ရုပ်ပုံများကိုနှစ်ဦးစလုံးကိုသုံးနိုင်သည်။
Huawei ကပေါ်ဖို့အတွက် QR Code ကိုစကင်ဖတ်မှဘယ်လိုနေသလဲ?
ကင်မရာ app ကိုအသုံးပြုခြင်း
လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာသင်၏အဟွာဝေးကိရိယာပေါ်တွင် default အနေနဲ့ကင်မရာ app ကိုဖွင့်လှစ်။
ယင်းအပေါ်ကင်မရာကိုအာရုံစူးစိုက် QR ကုဒ်ကို နှင့်ကုဒ်၏ရုပ်ပုံယူပါ။
ကယ်တင် image file ကိုရရန်ပြခန်း app ကိုဖွင့်ပါ။
အောက်ခြေတွင်, သင်သည်သင်၏မျက်နှာပြင်၏အောက်ခြေတွင်ပို button ကို (သုံးစက်) ကိုအသာပုတ်နိုင်ပါတယ်။
စက္ကန့်အနည်းငယ်ပြီးနောက်, သင့်သည့် Huawei device ကိုအလိုအလျှောက်ဓာတ်ပုံ detect နိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာသင်အနေနဲ့ option ကိုမီနူး၏အောက်ခြေတွင် "ပုံရိပ်အတွက် QR ကုဒ်ကိုစကင်ဖတ်" ကိုပြသပါလိမ့်မယ်။
image ကိုကနေ QR ကုဒ်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဤ option ကိုရွေးချယ်ပါ။
စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့ပြီးနောက်ကသင့်ရဲ့ device ကိုအပေါ်ဆက်စပ် app တွေနှင့်အတူဖိုင်ကိုဖွင့်ပါသို့မဟုတ်ရလဒ်ကူးယူရန်သင့်အားမေးပါလိမ့်မယ်။
QR ကုဒ်ကိုပြီးသားသင့်ရဲ့ device ကိုအပေါ်ကိုမသိမ်းဆည်းဘာဆိုရငျကော
QR ကုဒ်ကိုသင့်ရဲ့ Huawei ကဖုန်းပေါ်မှာကယ်တင်ခြင်းသို့မရောက်ကြလျှင်, သင်သည်သင်၏ device ကိုပေါ်သို့ image ကို download လုပျနိုငျသညျ။ ပြခန်း app ကိုအပေါ်အောက်ခြေ menu ကိုဖွင့်ဖို့ပုံရိပ်ပေါ်ထိပုတ်ပါ။ က "ပို" option ကိုအပေါ်နှိပ်ပြီးနောက်ဒုတိယအဘို့အစောင့်ပါ။ ဒါဟာ "သင်ကထို option ကိုပြသပါလိမ့်မယ်QR ကုဒ်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေး မီနူး၏အောက်ခြေတွင်ပုံသဏ်ဌာနျ "၌။ Huawei ကဖုန်းကုဒ်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးနိုင်အောင်ဒီ option ကိုရွေးပါ။
တတိယပါတီ Apps ကပအသုံးပြုခြင်း
သငျသညျကို Android 7.0 သို့မဟုတ်အထက်ဗားရှင်းနဲ့အတူဟောင်းနွမ်းသည့် Huawei Device များအသုံးပြုနေသလား သင့်ရဲ့လက်ရှိ Huawei က device ကို QR ကုဒ်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့ထောက်ပံ့မဟုတ်လော စိတ်မပူပါနဲ့။ ကျနော်တို့ဟွာဝေးများအတွက်အကောင်းဆုံး QR ကုဒ်ကိုစကင်နာအချို့ကိုဖော်ပြထားသောပါပြီ။
လျှပ်စီးဖို့အတွက် QR Scanner
လျှပ်စီးဖို့အတွက် QR Scanner Android အတွက်အဆုံးစွန်ဘားကုဒ်ကိုနှင့် QR ကုဒ်ကိုစာဖတ်သူကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ app ကိုအတူဘားကုဒ်ကို / QR ကုဒ်ကိုစကင်ဖတ်ဖို့အားဖြင့်ဘယ်နေရာမှာမဆိုကနေ Access ကိုအထူးလျှော့စျေးနှင့်အထူးနှုန်းများ codes တွေကို။ ဒီ app ကိုသာအနည်းငယ်အရေးကြီးသောခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ privacy ကိုမထိခိုက်ပါလိမ့်မယ်။
သင်သည်သင်၏သီးနှံသေတ္တာ၏နောက်ကျော panel ကိုအပေါ်တဦးတည်းအပါအဝင်သင်ကြိုက်နှစ်သက်မဆိုဘားကုဒ်ကို, ဆိုလိုသည်မှာစကင်ဖတ်စစ်ဆေးပေးနိုင်သည်။ ဒါဟာ view finder ပါဘို့ scan ဖို့မလှယျကူသောပင်သေးငယ်ဖို့အတွက် QR codes တွေကို, ရန်ဒီကုဒ်တစ်ခုဘက်ပေါင်းစုံမှန်ဘီလူးအင်္ဂါရပ်ရှိပါတယ်။ ဒါဟာရုံကင်မရာ app နဲ့ဘာမှကို အသုံးပြု. အဘို့အကမေးတယ်။
(အားလုံး-In-One) QR + ဘားကုဒ် Scanner
ကောင်းပြီ, ဒီ QR + ဘားကုဒ် Scanner နဲ့စာဖတ်သူကို app ကိုလျှပ်စစ်ပြက်-အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျနှစ်ဦးစလုံး QR codes တွေကိုနှင့်ဘားကုဒ်များစကင်ဖတ်စစ်ဆေးပေးနိုင်သည်။ ဒါဟာအားလုံးနီးပါး QR နှင့် 1D နှင့် 2D codes တွေကိုကဲ့သို့စျေးကွက်အပေါ်ရရှိနိုင်ဘားကုဒ်များထောက်ခံပါတယ်။ ဒါဟာ QR ကုဒ်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့အတွက်အလွန်စွယ်စုံ App ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ app ကအရမ်းအသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေသည်နှင့်ဒီ app ပတ်သက်. အကောင်းဆုံးအရာတစျခုကသုံးစွဲဖို့အင်တာနက်ကိုမလိုအပ်ပါဘူးဆိုတာပါပဲ။ ထို့ကြောင့်သင်ထားတဲ့အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဘယ်မှာမဆိုရာအရပျမှာဘားကုဒ်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးပေးနိုင်သည်။ သို့သျောလညျးကိုသင် QR ကုဒ်ကိုသုံးပြီး URL ကိုဖွင့်လှစ်ရန်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ထားဖို့လိုပါမယ်။ သင် QR ကုဒ်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးနှင့်စကင်ကိုသမိုင်းများတွင်ရလဒ်ကယ်တင်နိုင်, မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ ဤနည်းကိုသင်ပြန်သွားပြီးရလဒ်တွေ့နိုင်ပါသည်။ အားလုံးအားလုံးအတွက်, ကသင့်ရဲ့ Huawei ကဖုန်းကိုတစ်-ရှိရမည် QR ကုဒ်ကိုစကင်နာဖြစ်ပါတယ်။
QR Code ကို Reader ကို
No.3 မှာထက်အခြားအဘယ်သူမျှဖြစ်ပါသည် QR Code ကို Reader ကို, အမြန်ဆုံး QR ကုဒ်ကိုစကင်နာများအကြားဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနဲ့စမ်းသပ်ပြီးသော။ ဒါဟာအလိုအလြောကျ QR ကုဒ်ကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်က view finder ပါထဲမှာကို detect အခါကုဒ်စိစစ်သည်။ ထိုကွောငျ့, သငျသညျ scan မှမဆို button ကိုနှိပ်စရာမလိုပါဘူး။ code ကိုတစ်ဦး URL ကိုရှိပါတယ်ဆိုပါကသင်ကတူညီတဲ့ဝင်ရောက်ဖို့သင့် browser ဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်ဟုမပါဘဲတတ်၏။ ဒါဟာအစကသင်၏အဆင်ပြေတဲ့ browser ကိုခလုတ်ရှိပါတယ်။ ၎င်း၏ဘက်ပေါင်းစုံ browser ကိုမရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာသင့်ရဲ့ default အဘရောက်ဇာကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ပါ။
code ကိုသာစာသားကိုလည်းမရှိဆိုပါကလျင်မြန်စွာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အားလုံးသင် app ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် code ကိုအာရုံစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒါဟာအလိုအလျောက် QR ကုဒ်ကို detect ပါလိမ့်မယ်။
ဒါဟာသင့်ရဲ့ Huawei ကဖုန်းကိုအခြားအသုံးများ QR ကုဒ်ကိုစကင်နာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ app ကိုအလွန်လူကြိုက်များဤနေရာတွင်စာရင်းအခြား QR ကုဒ်ကိုစကင်နာများကဲ့သို့ဖြစ်၏။ သို့သော်ထိုသို့ထူးခြားသော features တချို့ကိုရှိပါတယ်။ ဒါဟာ QR ကုဒ်ကိုနှင့်အတူသုံးစွဲဖို့ '' ချက်ချင်းစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့ '' အင်္ဂါရပ်ရှိပါတယ်။ အနည်းငယ်သာတင်သို့မဟုတ်ကြားခံနှင့်အတူ, QR Scanner လျင်မြန်စွာ Huawei ကဖုန်းပေါ်မှာ QR codes တွေကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးပေးနိုင်သည်။
သငျသညျ privacy ကိုစိုးရိမ်ပူပန်နေကြသည်လျှင်, သင်ကျိန်းသေဒီ app ကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အ app ကိုဖွင့်လှစ်တဲ့အခါမှာကင်မရာခွင့်ပြုချက်ခွင့်ပြုပါရန်သင့်အားမေးပါလိမ့်မယ်။ က task ကိုမှဆက်စပ်မရသောအရာတစုံတခုကိုတောင်းပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာအကောင်းဆုံးအရာပါပဲ။
နောက်ဆုံးပေမယ့်အနည်းဆုံးမဟုတ်! QR & ဘားကုဒ် Scanner အခြေခံအားဖြင့်အတော်ကြာအခြားသူတွေအဖြစ်အတိအကျတူညီပါဘူး။ ဒီ app ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများဖို့အတွက် QR codes တွေကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးပေးနိုင်သည်။ ဒါ့အပြင်သူကကြွင်းသောအရာတို့တွင်အထွက်မတ်တပ်ရပ်မှ ISBN ထောက်ခံပါတယ်။ ဒါဟာရိုးရှင်းစွာလိုင်းများ QR codes တွေကိုအတူ view finder ပါနဲ့ဒီ app ကအရမ်းအသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေသည်။ သင်က QR ကုဒ်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဆိုခလုတ်ကိုကိုင်ထားသို့မဟုတ်နှိပ်မှမရှိကြပါဘူး။
, URL ထုတ်ကုန်, ISBN, ပြက္ခဒိန်, အဆက်အသွယ်, အီးမေးလ်, Wi-Fi ကို, တည်နေရာနှင့်အခြားပုံစံများအပါအဝင် QR & ဘားကုဒ် Scanner ဘားကုဒ်များနှင့် QR codes တွေကိုအမျိုးအစားအားလုံးကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးပေးနိုင်သည်။ ဤနည်းကိုသင်အလွယ်တကူစျေးဆိုင်များနှင့်စူပါမားကက်ထဲမှာဘားကုဒ်များ scan ဖတ်ခြင်းဖြင့်စျေးနှုန်းများနှင့်စကင် codes တွေကိုနှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သူကသင့်ရဲ့ Huawei ကဖုန်းကိုများအတွက်အလွန်အဆင်ပြေပြေနဲ့နေရာလေးကို App ဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျနောက်ဆုံးပေါ် Android ဗားရှင်းကို run နောက်ဆုံးပေါ် Huawei ကစမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်ကိရိယာရှိပါကသင်သည်မည်သည့် Third-party app ကို download လုပ်ပါရန်မလိုအပ်ပေမည်။ သင်သည်သင်၏ default အနေနဲ့ကင်မရာ app ကို အသုံးပြု. ဘားကုဒ်များစကင်ဖတ်စစ်ဆေးပေးနိုင်သည်။ တနည်းအားဖြင့်, အချို့ကိုသင်ကဆက်ပြောသည် features တွေရှိသည်အများအပြား QR ကုဒ်ကို apps များကိုသုံးနိုင်သည်။ သင်ဒီမှာစာရင်းမသော QR ကုဒ်ကိုစကင်နာ app ကိုအသုံးပြုနေသလား မှတ်ချက်များအပိုင်းအတွက်ယခုကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြကြဘူး။ အကယ်. မရ, သင်အရှိဆုံးကြိုက်တတ်တဲ့ app အရာ?
Huawei ကပေါ်ဖို့အတွက် QR Code ကို scan Huawei က Device ကိုပေါ်ဖို့အတွက် QR Code ကို scan Huawei ကဖုန်းပေါ်မှာဖို့အတွက် QR Code ကို scan